Quotz azọrọ adọka - Quartz nwere ntakịrị agịga nke mbibi - vidiyo
Zụta quartz buchara ebumnuche na ụlọ ahịa anyị
Nkewazị adọwa adọwa bụ ọtụtụ quartz nke nwere agịga acetiki aciki nke rutile. A na-eji ya maka gemstones. Nleta ndị a na-eyikarị ọla edo, mana ha nwekwara ike ịcha ọla ọcha, ọla kọpa uhie ma ọ bụ nke ojii. Enwere ike kesaa ha na enweghị usoro ma ọ bụ na ngwugwu, nke a na-ahazi ka kpakpando dị ka oge ụfọdụ, ha na-adị obere ma ọ bụ buru oke ibu iji mee ka akụkụ ahụ quartz bụrụ ihe na-adịghị mma. Ọ bụ ezie na inclusions n'ụzọ dị iche iche na-ebelata uru nke kristal, a na-eji quartz ritized n'ezie elele maka ịdị mma na ịma mma nke nsonye ndị a.
Rutile bụ mineral oxide mineral nwere usoro kemịkalụ nke TiO2. A na achọta ya na okwute igneous, metamorphic na sedimentary. Rutile na-emekwa dị ka kristal nke nwere agịga n'ahụ mineral ndị ọzọ.
Quartz bụ mineral nke silicon na atom oxygen na usoro na-aga n'ihu nke SiO4 silicon – oxygen tetrahedra, ebe ikuku oxygen na-ekerịta n'etiti tetrahedra abụọ, na-enye usoro kemịkal nke SiO2. Quartz bụ mineral nke abụọ kachasị akụ na ụba ụwa, na-akpata feldspar.
Iche iche nke quartz
E nwere ọtụtụ iche iche nke quartz, ọtụtụ n'ime ha bụ obere okwute dị oke ọnụ ahịa. Kemgbe oge ochie, ụdị quartz abụwo ihe ndị a na-ejikarị emebe ọla na ihe ndị siri ike, karịsịa na Eurasia.
Crystalkpụrụ Crystal na usoro ya
Quartz bụ nke sistemu kristal nke na-atọ ụtọ. Crystaldị kristal kachasị mma bụ paịlị nwere akụkụ isii nwere pyramid isii nwere akụkụ ọ bụla. Na kristal quartz kristal na-abụkarị ejima, ya na ejima aka ekpe na aka ekpe ekpe kristal, agbagọ, ma ọ bụ jikọtara ya na kristal n'akụkụ nke quartz ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ka naanị igosi akụkụ nke ọdịdị a, ma ọ bụ enweghị ihu doro anya kristal kpamkpam na gosi oke. Kristal ndị a chiri nke ọma na-etolite 'akwa' nke na-enwe uto a na-achoghi ekwenye ekwenye; a na-ejikarị kristal na nsọtụ nke ọzọ na matriks ma naanị otu pyramid nkwụsị dị. Agbanyeghị, kristal ndị akwụsịrị ike na-akwụsị mgbe ha na-etolite n'enweghị ihe jikọrọ ya, dịka ọmụmaatụ n'ime gypsum. Ihe eji eme onu ogugu bu udiri onodu a ebe uzo ihe nzuzu di dika ihe eji eme onu ogugu, dika ihe eji eme kristal na-egosi iru.
Tags Azụ Koi, Quartz
Tags Aha ya bụ Marcasite, Quartz
Tags Golden, Hematị, Quartz, Rutilated
Tags Anya Hawk, Quartz